﻿ मानसिक एवं मनोसामाजिक सु–स्वास्थ्यको राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी बनौं
मङ्गलबार ०६, साउन २०७७
मनोसामाजिक समस्या, मनोरोग, आत्महत्या जस्ता समाजका जटिल समस्याहरुलाई न्युनिकरण गर्न जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु अहिलेको प्रमुख आवस्यकता हो । यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै जनस्तरबाट नै मानसिक एवं मनोसामाजिक सु–स्वास्थ्यको राष्ट्रिय अभियान नेपालले शुरुवात गरेको हो ।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस २०७३ मनाउने क्रममा, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रमकाबिच तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय गगन कुमार थापाले यो अभियानको शुरुवात गर्नु भएको थियो । जसका लागि “मानसिक तथा मनोसामाजिक रुपमा स्वस्थ र समृद्ध समाज निर्माणका लागि हाम्रो योगदान” भन्ने नारा तय गरिएको छ ।
मनोविज्ञान र मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्वद्र्धन, प्रवर्द्धन र विकास तथा आत्महत्याको रोकथामका लागि सबैको साथ र सहकार्यको जरुरत पदर्छ । यो सबैको सरोकारको बिषय बन्नु पर्दछ । मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने सिमित संघ संस्था र व्यक्तिको प्रयासले मात्र यो सम्भव देखिदैन ।
स्वास्थ्यकर्मी , पत्रकार , कलाकार , शिक्षक, विधार्थी, उधोगी, व्यवसायी, समाजसेवी, अभियान्ता जस्ता सबै पेशा, वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरु यो अभियानमा आवद्ध हुन सक्नेछन् । यसमा सबैले आ–आफ्नो तहबाट आफूले सकेको योगदान स्वैच्छिक रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अभियानमा प्रवेश गर्नका लागि अन्य अभियान्ता बाहेक हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
यस अभियानमा संलग्न भई कार्यगर्ने प्रतिवद्धता जनाएसँगै अभियान्ताको नाम र ठेगाना अनुसार अभियान्ताको डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ । जुन अभियानको अफिसियल फेसबुकमा समेत राखिनेछ ।
–आफ्नो क्षेत्र र क्षमता अनुरुप अभियानका लागि गर्न सक्ने योगदानको बारेमा सार्वजनिक रुपमै प्रतिवद्धा व्यक्त गर्नु पर्नेछ ।
- यो अभियानमा संलग्न भएको जानकारी आफ्नो प्रमाण पत्र सहित सोसियल मेडियाबाट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ताकी तपाईंलाई अभियान्ताको रुपमा सबैले चिन्न सकुन र आवस्यकता पर्दा भेट्न जानकारी लिन तथा सहयोग माग्न सकुन ।
- आफूले गरेको कार्यको अवगत अभियानको फेसबुक पेजमा पोष्ट गरि सबैलाई गराउनु पदर्छ । अभियानका गतिविधिहरुलाई धेरै माझ पुर्‍याउन अभियानको पेज लाईक गर्ने र पोष्टहरु सेयर गर्ने गर्नु पर्दछ ।
- आफ्नो कारणले अरुलाई नकारात्मक असर नपुगोस् भनेर सधै सचेत रहनुपर्छ । मनोसामाजिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्यका बिषयमा आफ्नो ज्ञान बढाउदै लैजानुपर्दछ । यस बिषयमा विज्ञले लेखेका लेख, अन्तरवार्ता आदि नियमित रुपमा पढ्ने र सुन्ने गर्नुपदर्छ ।
- समस्या परेका व्उक्तिहरुलाई सकेको मद्दत गर्ने उनीहरुको कुरा सुन्ने, उपचारमा सक्दो पहल गर्ने, यस क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरुसँग सम्पर्क स्थापित गर्न मद्दत पुर्याउनु पर्दछ ।
* यस अभियानमा लागेपछि के फाईदा मिल्छ ?
- मनोसामाजिक समस्या तथा मानसिक स्वास्थ्यका बिषयमा आफैमा ज्ञान र चेतना वृद्धि गर्ने मौका मिल्नेछ ।
- मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथामका बिषयमा अभियानले बेला बेलामा निशुल्क तालिम प्रदान गर्नेछ । जसमा भाग लिन सकिनेछ ।
- अभियानले उपलब्ध भए सम्म मानसिक स्वास्थ्य र मनोविज्ञान विषयमा पाठ्य सामाग्री उपलब्ध गराईनेछ ।
- सामूहिक रुपमा कार्यगर्ने क्षमताको बिकास हुनेछ । विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुसँग परिचित हुने मौका मिल्नेछ ।
- यहाँहरुले गरेको कार्यको उच्च मुल्यांकन गर्दै बेला बेलामा सम्मानित गरिनेछ ।
- मानसिक रुपमा स्वस्थ र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने पवित्र उदेश्य लिएर शुरु गरिएको अभियान भएकाले यसमा जोडिएर कार्य गर्दा पक्कै आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ । हामीले गरेको सानो सहयोगले कसैको जीवन जोगाउन पनि सक्छौ । हामी कसैको पिडामा मलमपट्टी बन्न पनि सक्छौ। आउनुहोस् मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा कुराकानी गरौं ! छलफल चलाउ ! हामी सबैजना सहकार्य गरेर अगाडि बढौं !
—गोपाल ढकाल , मनोविद ।
मानसिक एवं मनोसामाजिक सु–स्वास्थ्यको राष्ट्रिय अभियान नेपाल ।
फोन नंः ९८१३५२७७३१
शिक्षकको समस्या नबुझेको की बुझ्न नचाहेको ?